गगनको गनगन ! - Deepak Raj Joshi
झट्ट सुन्दा यो लेख केवल गगन थापाका लागि लेखेको जस्तो सुनिएला तर यो लेख आफूलाई फरक धारमा राखी समाजलाई जादुको छडी लिएर परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने तमाम् युवा नेताप्रति समर्पित छ । यो लेखमा गगन भन्ने पात्र गगन थापा मात्र नभएर सम्पूर्ण युवा नेता हुन् । त्यस्ता युवा नेता जसलाई पद चाहिएको छ तर किन चाहिएको छ र पद पाएपछि के गर्ने भन्ने एजेन्डाको कुनै अत्तोपत्तो छैन ।
अरू कार्य जस्तै राजनीति पनि नागरिकले गर्नैपर्ने अपरिहार्य कार्य हो। स्वस्थ प्रजातन्त्रका लागि युवाहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ। युवा पुस्ता देशको प्रगति निर्धारण गर्ने प्रमुख स्तम्भ हुन् भन्ने कुरामा शंकै छैन । राजनीतिको चक्र युवाको संलग्नताविना घुम्दैन भन्ने कुरालाई हामी अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ। तर पनि नेपालमा ४० प्रतिशत जनता ४o वर्षभन्दा कम उमेरका छन् भने देशको राज्यभार ७० वर्षभन्दा बढी उमेर भएकाले नै सम्हालेका छन्।
नेपालका अधिकांश युवाहरू एउटा कुरामा विश्वास गर्छन् कि तिनीहरू त्यस्तो देशमा बस्छन् जहाँ पार्टी र सरकार अयोग्य मानिसहरूले आफ्नो फाइदाका लागि चलाउँछन् भने अर्कातिर स्नातक र स्नातकोत्तर गरेका युवाहरू कोही रोजगारी खोज्न सडकमा भौँतारिदै हिँड्छन्‌। कोही राहदानी च्यापेर मुगलान भासिन्छन् भने बाँकी रहेकाहरू सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई अग्रपंक्तिमा देखाउनमा व्यस्त छन् । टिकटक र फेसबूकले बर्बाद गरेको छ एउटा पूरै पुस्ताको सुनौलो समय।
आज वृद्ध भनिएकाहरूले पनि समाजलाई केही गर्छु भनेर युवा अवस्थाबाट नै राजनीति शुरू गरेका हुन्।
राजनीति गर्दागर्दै बुढा भए र आज तिनै वृद्धसँग भोट बैंक छ। युवाहरू तिनै बुढाको पछि लागि गाईको पुच्छरमा समाएर वैतरणी तरेजस्तै आफ्नो भविष्य बनाउन पार्टीको चुनावमा होस् वा सरकार चलाउने चुनावमा सधैँ भोट हाल्छन् । अब भन्नुहोस्, दोष कसलाई दिने ? चुनाव जिताउने युवालाई दिने कि चुनाव जित्ने वृद्धहरू लाई ?
नेपालको राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन र प्रगतिको प्रक्रियामा युवा एक महत्त्वपूर्ण शक्ति हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन। युवा पुस्ताका पनि आफ्नै कमी कमजोरी छन्। तर पनि उनीहरू पुरानो पुस्ताको विचारधाराका बन्दी भने होइनन्। मुल मुद्दा नयाँ पुस्ता वा पुरानो पुस्ता भन्ने होइन। मुद्दा त उनीहरूको सोच प्रक्रियाको हो। राजनीतिमा लाग्नेहरूको क्षमता र दक्षता भनेको समाजमा उनीहरूले पुर्‍याउने योगदान नै हो।
हामी तब मात्र राम्रो काम गर्न र सफल हुन सक्छौँ जहाँ फरक पिँढीबीचको सङ्घर्षविना विविधतालाई स्वीकार गर्ने क्षमता, मानसिकताका साथै वैचारिक खुलापन र फरकधारलाई पनि सम्मान गर्न सक्ने नेतृत्व हुन्छ ।
समाज आफ्नै तरिका र आफ्नो गतिले परिवर्तन हुन्छ। यदि परिवर्तनको गति बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईंको सोचको गति पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ। तपाइँ आफू मन्द गतिमा अगाडि बढिरहने हो भने समाज परिवर्तनको पखेटा लगाएर उड्नेवाला छैन।
गगन थापा युवाको ढुकढुकी अवश्य हुन्। उनी समसामयिक विषयवस्तुप्रति जानकार छन्। भाषण गर्न सक्छन्। जसमा एउटा जमातलाई सम्झाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउने क्षमता पनि छ। उनका राम्रा/नराम्रा पक्ष दुवै छन्। उनमा भएको राम्रा कुरा त राम्रा भई नै हाले, उनले नराम्रा कुराहरूमा पनि समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजालान् । एकथरि युवाहरू यो समाजमा पनि गगन थापा जस्तो नेता छन्, भनेर ढुक्क छन्।
सबैभन्दा पुरानो र ठूलो पार्टीमा गगन थापा मात्र युवाको ढुकढुकी हुनु भनेको खुशी होइन, दु:खको कुरा हो। गगनजस्ता धेरै नेताको जमात नहुनु हाम्रो समाजको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो।
गगन थापा यो समाजका लागि चाहिने असल नेता हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ जनताले तब मात्र पाउने छन्, जब समाजमा गगन जस्ता धेरै नेता हुनेछन्। उनीहरू बीचमा निष्पक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। विनाप्रतिस्पर्धा यो असल यो खराब भनेर निर्णय लिनु हुँदैन।
७०० पूर्णाङ्कको परीक्षामा ३०० ल्याएर प्रथम हुने विद्यार्थीलाई प्रथम भएको त भन्न मिल्छ तर साँचो अर्थमा भने प्रथम भएको भन्ने होइन। सबै खराबहरूमध्येको असल हुनु सच्चा मानेमा असल हुँदैन। राजनीति एउटा टीमवर्क हो। जसरी एउटा असल खेलाडीको कारणले मात्र खेल जित्न सकिँदैन, त्यसरी नै केबल एउटा असल नेताको आडमा समाज परिवर्तन हुँदैन।
अब रह्यो पुरानो पुस्ताले बिदा लिनुपर्छ भन्ने कुरा। राजनीतिज्ञको उमेरको प्रश्न संवेदनशील, व्यक्तिगत र पूर्वाग्रहको विषय हो। तर यो नयाँ विषय भने अवश्य होइन । प्रत्येक नयाँ पिँढीकाहरूलाई हामी पुरानो पिँढीभन्दा असल छौँ भन्दै पुरानो पिँढीलाई दोष दिएकै हुन्छन् ।
चाहेर नचाहेर उमेरसँगै मानिसमा मानसिक र शारीरिक गिरावट आउँछ । राजनीतिमा उमेर, लिङ्ग, जाति, वर्ग र यौन जस्ता विशेषताले निर्वाचित नागरिकको व्यवहार र नीति निर्माणमा प्रभाव पार्छ । बुढाहरू पनि यही समाजका अंग भएकाले राजनीतिमा संलग्न रहनु उनीहरूको नैतिक दायित्व हो ।
राजनैतिक लक्ष्य र आदर्श हासिल गर्नका लागि आउने चुनौतीहरूको सामना गर्न लचिलो हुनुपर्दछ। कसले बनाउने भन्दा पनि कसरी बनाउने भन्ने चिन्ताको विषय हो । उनीहरू यदि परिवर्तनको चाहना राख्छन् भने गुटको पछि नलागेर युवाको मात्र समूह बनाएर छुट्टै चुनाव लड्न किन सक्दैनन् ?
पुराना राजनीतिज्ञको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको उनीहरूको उमेरसँगै आएको ज्ञान र अनुभव मात्रै होइन, उनीहरूसँग भएको आत्मसंयम र धैर्यता पनि हो, जो युवा पुस्तामा बिरलै भेटिन्छ । आत्मसंयम, धैर्यता र स्थिरताले पुराना राजनीतिज्ञलाई विशेष गरी संकटको समयमा मूल्यवान बनाउँछ। जबकि यस्तो समयमा युवा अर्थात् कम अनुभवी नेताहरूले होश गुमाउन सक्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ।
उम्मेदवारहरूको उमेर नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा उनीहरूको विचार हो। हामीलाई पुरानो भए पनि बुद्धिमानी र असल नेतृत्व चाहिएको छ । उमेरले परिपक्वता, परिप्रेक्ष्य र आत्म-ज्ञानको एक निश्चित मात्रा ल्याउँछ। जसले हामीलाई हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्यहरू हाँसिल गर्न र दिनुपर्ने प्राथमिकतामा पुनर्विचार गर्न मद्दत गर्दछ।
हाम्रा नयाँ पुस्ताले बुढाहरूले मात्रै देश चलाए भनेर कुर्लिनुको अर्थ अमिताभ बच्चनलाई बुढो भयो अब फिल्म नखेल नयाँ पुस्ताले फिल्म खेल्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरे जस्तै हो। बुढेसकालका गीतकारलाई गीत नलेख, संगीतकारलाई संगीत नगर, बुढो लेखकलाई नलेख, बुढो वकिललाई मुद्दा नलड भन्नु कतिको जायज कुरा हो? हाम्रो देशमा राजनीति गर्ने पुरानो पुस्ता अमिताभ बच्चन जस्ता छन् कि छैनन्? त्यो फरक पाटो हो, जसका बारेमा बेग्लै छलफल हुनु जरुरी छ।
राजनीति भनेको राज्यको नीति, व्यवस्थालाई ठीक गरी जनताका लागि अन्य देशप्रतिको कूटनैतिक सम्बन्धलाई ठीक राख्ने व्यवहारगत व्यवस्था हो । जो यस्ता कुरा गर्न सक्षम छ, ऊ नै राजनीतिका लागि योग्य हुन्छ।
२१औं शताब्दीमा आएर उमेरका आधारले मात्र कसैलाई काम गर्न दिन हुन्न भन्ने विचार राख्ने युवालाई बुद्धिमान युवा भन्न मिल्दैन। जब विचार नै लिबरल र दूरदर्शी छैन भने उनीहरूले गर्ने कार्य कस्तो होला? जो उमेरमा मात्रै युवा हुन्, चेतनामा भने पूरै गुट र उपगुटमा लिप्त भएका छन् भने तिनीहरूले पार्टीलाई निकास दिन सक्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
अहिलेका कांग्रेसका युवा नेताहरू घाँटी सुक्नेगरी बुढाहरूलाई बिदा गर्नुपर्‍यो भनेर कराउँछन्। उनीहरूलाई बुढा नेताहरूले के गरेनन्, युवाहरूले के गर्न सक्छन् भनेर सोध्यो भने त्यसको जवाफ दिन नसक्ने मात्र होइन जवाफ दिने हैसियत पनि राख्दैनन्। राखुन् पनि कसरी ? धेरैजसो बौद्धिक टोपलिने उनीहरूको बौद्धिक क्षमता औसतभन्दा पनि तल छ ।
परीक्षामा चिट चोरेर ढुंगामुढाको राजनीति गरेर माथि उठेकाहरूबाट के नै आशा गर्न सकिन्छ र ?
राजनीति र विकास एउटा सामूहिक कार्य हो। तर यहाँ त व्यक्तिवाद हाबी भएको छ । व्यक्तिगत प्रचारबाजीका लागि जे पनि गर्ने र बोल्ने नेताले समाजको विकास गर्न सक्दैन। के कांग्रेसमा युवा नेता आएपछि समस्या समाधान होला त ? अवश्य हुँदैन । जबसम्म हाम्रो समाजमा राजनैतिक प्रवृत्ति फेरिँदैन तबसम्म पात्र मात्र फेरिएर केही हुनेवाला छैन । प्रवृत्ति एकल काम होइन यो सामूहिक काम हो। नेतृत्व कसैले छाड्दैन, दाबी गर्नेले नेतृत्व लिने क्षमता राख्नुपर्छ । युवाले नेतृत्व गर्दैमा देशको समृद्धि हुने होइन ।
राजनीति युवामैत्री भन्दा पनि समाजमैत्री, सिद्धान्तमैत्री हुनुपर्छ । अहिले नेपालमा भएका धरैजसो युवाहरू भरोसा गर्न लायक देखिँदैनन्। यसको अर्थ यो होइन कि बुढाहरू भरोसा गर्न लायक छन्। राजनीतिमा संस्कार र सिद्धान्त ठूलो कुरा हो जो रातारात आउँदैन। देश बनाउने हो भनेर कराउँदै र दौडँदैमा देश बन्दैन। राजनैतिक संरचनाभित्र रहेर सबै काम गर्नुपर्छ ।
राजनैतिक लक्ष्य र आदर्श हासिल गर्नका लागि आउने चुनौतीहरूको सामना गर्न लचिलो हुनुपर्दछ। कसले बनाउने भन्दा पनि कसरी बनाउने भन्ने चिन्ताको विषय हो । उनीहरू यदि परिवर्तनको चाहना राख्छन् भने गुटको पछि नलागेर युवाको मात्र समूह बनाएर छुट्टै चुनाव लड्न किन सक्दैनन् ? किनभने उनीहरूसँग भोट बैंक छैन ।
अहिलेका युवा नेताहरूको चाहना आफ्नो बलबुतामा होइन बुढाहरूले छाडेर तीनै बुढाहरूको गुटका मान्छेको सहायता लिएर नेतृत्व लिन चाहन्छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा अहिले युवाहरू छन् ।
कुनै पनि बैठकमा युवाहरूले फरक ढंगले पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भावी योजना प्रस्तुत गरेको वा बैठकमा युवाहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको देखिँदैन। त्यही बुढा नेताको पुच्छर भएर हातमा हात मिलाएको मात्र देखिन्छ। नयाँ पुस्ताले कांग्रेसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कार्यक्रम प्रकाशित भएको देखिएको छैन।
बी.पीको सपना साकार पार्नुपर्छ भनेर रटान लगाएको ७० वर्ष भयो। के युवा नेतामा अहिलेका Alpha generation को सपना के हो र कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा चिन्ता नै छैन । भएपनि कुनै लिखित योजना छैन। अंग्रेजी एउटा भनाइ छ, ‘if you fail to plan you are planning to fail’ यदि तपाईं योजना बनाउन विफल हुनुभयो भने तपाईं असफल हुन योजना बनाइरहनु भएको छ। यो भनाइ नेपाली कांग्रेसका युवा नेतामा ठ्याक्कै लागू हुन्छ । युवाहरूले नेपाली कांग्रेसजस्तो ३२ लाख भोट भएको संगठनलाई अगाडि बढाउने तत्कालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू के हुन् त त्यो प्रस्ट पारेका छैनन् ।
धेरैजसो युवा नेताहरू विश्वविद्यालय राजनीतिमा आएका भए पनि ती नेताहरूले आजका युवालाई प्रभावित गर्ने मुद्दाहरू उठाएको देखिँदैन। अमेरिका जस्तो विकसित मुलुकमा पनि २०२० को चुनावमा सबैभन्दा बुढा राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार बर्नी स्यान्डर नै विद्यार्थी ऋण, युद्ध र जलवायु परिवर्तनका लागि सबैभन्दा महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाका साथ चुनाव लडेका थिए, जुन मुद्दाहरू युवाका बीच पनि लोकप्रिय थियो ।
५१ प्रतिशत महिला भएको देशमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढी हुनु पर्ने होइन र ? यो भन्दा अगाडिको कांग्रेसको चुनावमा एकजना पनि महिला प्रतक्ष्यतर्फ निर्वाचित भएनन्। जबरजस्ती कोटाका आधारमा र आफ्नो परिवारका महिलाबाहेक अरू महिलालाई नेतृत्व अगाडि ल्याउने कुनै योजना नेपाली कांग्रेसले गरेको देखिँदैन‌। युवाले नेतृत्व लिन्छु भन्दै गर्दा कति प्रतिशत माहिला त्यसमा समावेश हुने हुन् त्यसको कुनै योजनासम्म पनि छैन। उनीहरू पनि केही माहिलालाई कोटामा पद दिउँला भन्ने योजनामा नै छन्। बीपी कोइरालाको पालापछि नेपाली कांग्रेस गुणात्मक रूपमा समावेशी भएको देखिँदैन । पुरानो पुस्ताले बिदा लिनुपर्छ भन्नु दलित, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक लगायतकाहरूले आरक्षण कोटा पाएजस्तै युवाले पनि कोटा मागेबराबर हो ।
उमेरले युवा हुँदैमा उनीहरूले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने होइन । उनीहरूमा समयसापेक्ष ताजा विचार, नयाँ दृष्टिकोण र बुद्धि हुनु जरुरी छ। युवा हुनु एउटा सद्गुण हो तर युवा हुँदैमा जादुको छडीले जादु देखाए जस्तैगरी समाज परिवर्तन हुँदैन । कार्यकर्तासँग जोडिन समय लाग्छ । विना विचार र विना कार्यकर्ता म नेतृत्व लिन सफल छु भन्नु कहिले काहीँ पार्टीप्रति पनि घातक सिद्ध हुन सक्छ।
चुनाव लडेर सरकार चलाउनका लागि उमेरको हदबन्दी राख्न सकिनेछ। तर पार्टी विचारले चल्ने हो र विचारको कुनै उमेर हुँदैन। विचारमा परिपक्वता उमेरले आउँछ । विचारको मन्थन हुने पार्टीमा राम्रो विचार दिने व्यक्ति भए सरकारमा असल काम गर्न सक्ने युवालाई पठाउन सकिन्छ।
युवाहरूसँग नयाँ दृष्टिकोण हुन्छ भने बुढाहरूसँग धेरै अनुभव हुन्छ। विना अनुभवको दृष्टिकोण र विना दृष्टिकोणको अनुभव राजनीतिमा घातक सावित हुन्छ। समावेशी राजनीतिक प्रणाली मौलिक प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि मात्र नभएर असल नीति निर्माण र समग्र विकासका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राजनीति देशको समृद्धिका लागि गरिन्छ। देश र समाजलाई केही गर्न सकिएन भने पनि आफ्नो पार्टीको समृद्धिका लागि गर्नुपर्छ। तर यहाँ आज गुट मात्र नभएर केबल व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीति गरिन्छ ।
कांग्रेसका युवा पुस्ताहरूले आज छोराछोरीले बाउआमाको शेखपछिको अंशबापत सम्पत्ति पाएजस्तै पुरानो पुस्ता गयो भने पद पाइन्छ भनेर ढुकेर बसेका छन्। पद ढुकेर बस्नुभन्दा आफ्नो क्षमताले पद हासिल गर्नेतिर लागे बेस हुन्छ नि होइन र ? आफूलाई असल नेता बनाउने काममा कसरत गर्न नसक्ने युवाले कांग्रेसलाई कुन दिशा दिन सक्ला? वास्तविक परिवर्तन राजनीतिक विविधताको कारणले आउँदछ । त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्दछ, जसले हामीले समर्थन गरेका मुद्दालाई समर्थन गर्दछ।
समाजमा बढ्दै गएको हिरोगिरि अर्थात् मपाईंत्व देख्दा यस्तो लाग्छ सबैलाई पदको नशा लागेको छ । गनगन र भनाभनले पार्टीमा र देशमा समृद्धि ल्याउँदैन। अर्थ विनाको जीवन र उद्देश्य विनाका युवा समाजका लागि खतरनाक हुन्छन् । यदि साँच्चैनै युवाहरूलाई नेतृत्व लिन मन छ भने युवाहरूले एउटा पुस्ताले राजनीतिबाट बिदा लिनुपर्छ भन्नुको सट्टा जनतालाई कसले उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने निर्णय गर्न दिनुपर्छ।
यसले गर्दा एउटा सकारात्मक सन्देश जानेछ । उमेर मात्र नेतृत्व गर्ने क्षमताको कारक हुनु हुँदैन। बरु अहिलेका युवा नेताहरूले अरू थप युवाहरूलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाएर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । जब असल युवा नेताहरूको जमात ठूलो हुन्छ, खराब पुराना नेताहरू आफैँ विस्थापित हुनेछन् ।
पार्टीको नेतृत्व अंश जस्तो हो र मागेर पाइने? कानूनअनुसार बाउआमाले आफ्नै सम्पत्ति त छोराछोरीलाई दिनुपर्दैन, यदि उनीहरू लायक छैनन् भने । नेतृत्व भनेको त सामाजिक जिम्मेवारी हो । समाजलाई कुन दिशातर्फ लानेजस्तो गम्भीर जिम्मेवारी मागेर पाइने कुरा हो र ? नेतृत्व आफैँ निखारिएर लिने हो भिखमा आउने चिज होइन ।
यदि सही सिद्धान्त र संस्कारमा राजनीति गरेको भए जनताले कुनै पनि गुटमा नभए पनि नेता बनाउने छन्। भिखमा आएको नेतृत्वले भविष्यमा भिकारीबाहेक अरू केही बनाउँदैन। विना दर्शनको प्रदर्शनले आफ्नो राजनीतिक आधार बनाएका युवाबाट के साँच्चै नै काँग्रेसले गति लेला त ? त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।
By admin|2021-08-26T22:32:37+05:45August 26th, 2021|Nepali|0 Comments